Ogaden News Agency (ONA) – Yemen: Dhalinyaro Kasoo Jeeda Ogadeniya oo Shil Gaadhi Ku Dhaawacantay.
Yemen: Dhalinyaro Kasoo Jeeda Ogadeniya oo Shil Gaadhi Ku Dhaawacantay.
Ugu yaraan lix gabdho iyo wiilal da’ yar iskugu jira ayuu dhaawac culus soo gaadhay kadib markii gaadhi ay saarnaayeen Isniintii 23/01/2016 kula gadoomay xuduudka uu dalka Yemen la leeyahay Sacuudi Carabiya.
Dhalintan kasoo jeeda dalka gacanta taliska Tigray-ga wali kusii jira ee Ogaadeeniya ayaa gaadhi ay saarnaayeen oo kusii jeeday Sacuudiga markuu marayay jidka dowga loo yaqaan *Al-Thaabit* uu biriiga goostay.
Darawalka gaadhigaas ay saarnaayeen rakaabku waday oo mudo shan daqiiqo halgan kula jiray si uunan gaadhigu dowga uga dhicin ayaa ku dhuftay dhinaca midigta buurta taasoo sababtay inay afarta taayir ee gaadhigu cirka sare maraan kahor inta uunan mar labaad taayiradiisa dib ugu istaagin.
Wiil kamid ahaa dadka rakaabka ah oo noo waramay ayaa noo sheegay in uu isagu dhaawac fudud kaqabo misigta midig iyo gacanta midig. “Waxaan ka booday gaadhiga markii aan ogaaday inay talo faraha ka baxday; waxaan dhib laheyn ayaa iga soo gaadhay misigta midig iyo gacanta midigta, Ilaahay ayaan ugu mahadinayaa badbaadintiisa,” Cabdirisaaq ayaa yidhi, isagoo gacanta ku taabanaya misigta iyo gacanta uu ka xoodh-xoodhay.
Waxa uu u miyir qabay C/Risaaq nusdarsin dad ah oo horay gaadhigu hoosta marsaday oo dhulka miyir la’aan daadsan , halka kuwa anfariirka iyo naxdinta la muquurshan ay ku qeyl-yayaan towxiidka “Laa Ilaaha Ila’laa iyo erayo kaloo ay ka mid yihiin ” ha la i saamaxo dhintaye.”
Cabdirisaaq, wiilkan u dhashay Ogaadeeniya waxa uu helay kalsooni uu dadka inta naxsan uu ku dhirdhirbaaxo isagoo u sheegaya in la nabad qabo oo dhaawac mooyee, dhimasho qofna ku iman Allahoodana ugu xamdiyaan inay nool yihiin wali. Dadka goobta daadsanaaa oo kala ahaa saddex wiil iyo saddex gabdhood oo dhaawac culus ka soo gaadhay shilkaas ayay niyadu u degtay, marka ay maqleen inay wali ifka ku sii hadhsan yihiin.
Waxaa kamid ah dadka ay dhaawacyada adag soo gaadheen: Faysa, Fatxi, Nasri, Axmed , C/Casiis iyo Jawhar . Faysa waxaa soo gaadhay jug feedhaha ah. Nasri feedho ayaa jaban. Axmed gacanta midig ayaa loo maleynayaa inuu ka jabay. Naaska bidix dushiisa waxay jug kasoo gaadheen, Fatxi. Cabdicasiis gacanta bidix ayuu ka cad go’ay, halka Jawhar oo ah gabadhii ugu darayd uu sarwaji ka jeexmay wajiga, ilkahana qaarna ka jajabeen. “Waxa aan ogaaday in Jawhar ay tahay gabadha dhaawaca ugu daran qabta. Waxaan kusoo celiyay haragii wajiga oo madaxa dabamaray,” ayuu yidhi Cabdirisaaq oo u waramay Wariyaha madaxa Banaan ee Axmed Cabdi.
Dadkan dhaawaca ah ayaa nasiib u yeeshay inuu gaadhi weyn oo wada’da marayay uu u soo qaado dhakhtar yar oo ku yaalay tuulada ugu dhawayd ooy ka heleen gargaarkii ugu horeeyay.
Dadka dhaawaca soo gaadhay oo saarnaa sagxada gaadhi afarta shaag dhulka ka qaadaya ayay dani ku qasabtay inay xamilaan sida qaabka daran ee uu u eryayay dirawalka wada’da rafta ah ee buuraleyda *Al-Thaabit baabuurka waday oo si lamid ah Anbalaas dhaawacyo iyo dhakhaatiir is la doonaneysa u eryayay. Waxa uu rabay in aan qof ka qudh bixin.
Dhaawaca ayaa lagu habay caano iyo waxyaalo kaloo dareerayaal ah, halka dhiig joojin iyo dadka qaarkii jikhdoodu u baahnaa in la qodbo, si qaab daran loo toltolay. Jawhar oo ah gabadh sanka dhiig ka waday ayaa u baahatay dhakhtar dhaama kan ay markii hore ku soo martiyeen Tuuladii ugu horaysay.
“Jawhar oo dhul iyo cir qaban la’ ayaan lasoo lugeeyay mudo dheer, si aan u helo gaadhi aan u gacan haadiyo oo i geeya magaalada iigu dhow; haseyeeshee, ninkii muharibka wax tahriibinayay oo baaskoolad ku hubeysnaa iyo aniga oo waranle ah ayaa is ku khilaafnay halka gabadha la geynayo ka dib markii uu nooga dabayimid meel fog,” ayuu yidhi Cabdirisaaq.
“Waxa uu rabay muharibka Oromada kasoo jeeda in loo leexiyo dhanka uu joogo ninka isaga masuulka kasii ah, taasoo aan ka gowsqabsaday isagoo aan markii danbe u hanjabay, isna uu tuhun galey oo uu u qaatay in aan ciidan uu horay iigu arkay aniga oo lasocda u raadsanayo, dabadeetana, sidaas igaga tagay.” Waxa ay caawimaad ka heleen gaadhi wada’da marayay kaas oo dirawalkii sidii uu u soo waday u keenay dad Islaanimadu ka dhab tahay oo gacan qabtay.
“Dadkaas oo markii danbe si weyn isugu xilsaaray in ay naga gacansiiyaan imaanshiyahanaga magaalada Sacda oo aan markii danbe gaadhi aan ku nimid Caasimada Sanca kasoo raacnay,” ayuu hadalkiisa ku daray Cabdirisaaq.
Jowhar ayaa hadda ku jirta Isbitaal ku yaal magaalada Sanca oo lagu dhakhtarinayo. Jowhar iyo dhalinta kale ee shilka ku galay xuduudka Sacuudiga waxay kamid yihiin kumanaanka isaga soo tagay dalkooda batroolka qaniga ku ah, dalkaasoo ayna ku helin amaan, nolol iyo nafci kale toona.
Marka laga yimaad Jawhar, dadkii intiisii kale ayaa lagu soo waramayaa inay ku sii jeedaan dalka Sacuudiga iyagoo dhaawacyo khatar ah qaba. Lama oga inay askarta ilaalada Sacuudiga ee xuduudka dhooban ay u gacan galidoonaan iyo in kale.
Shacabka Soomaalida Ogaadeeniya ayaa u adkeysanaya dhib ay soo xanbaarsanaayeen tobanaan sano ooy ka danbeeyaan quwado shisheeye, taasoo ay Alle dartii ugu samrayaan, is la markaasna raxmadiisa ugu sugaya faraj deg-deg ah ooy ku iloobaan huqdiga ay kusoo noolaayeen gu’yaal badan.